Dascanio dia mampiseho fanomezana mendri-kaja amin'ny photorealism | Famoronana an-tserasera
Amin'ny Creativos Online matetika isika manome toerana malalaka ho an'ireo mpanakanto vaovao izay mitondra ny sangan'izy ireo manana kalitao avo lenta ary matetika mahita ny lakileny mety hivoatra miaraka amina teknika na fomba famoronana hisarika ny sain'ireo mitsidika anay ary koa ireo izay manoratra eto isan'andro.
Ity habaka ity koa dia manampy antsika Mampifaly anay amin'ny fahalehibiazana azon'ny mpanao sary hosodoko sasany afenina ary ireo mpanakanto manana teknika mahavariana, toa an'i Emanuele Dascanio. Mpanao hosodoko iray izay hamela anao ho talanjona amin'ny kalitaon'ny asany tsirairay avy ary manana tombana lehibe ho an'ny saripika sy ny endrik'olombelona hahitanao ny glades mainty novonoina tamim-boninahitra.
Ary tsy vitan'ny hoe misy sangan'asa mahatalanjona izay mainty sy fotsy no tena mpilalao, fa amin'ny loko Dascanio dia mampiseho toetra tsara sasany mahatalanjona hahazoana photorealism amin'ny ambaratonga avo dia avo.
Emanuele Dascanio dia teraka tany Milan tamin'ny 1983 ary mihaona amin'ny mpanao hosodoko isika izay ny fahalavorariana dia iray amin'ny fanomezana lehibe ananany miaraka amin'ny fanoloran-tena lehibe amin'ny fandalinana ny teknikan'ny kanto, zavatra iray izay azo porofoina amin'ny sanganasa tsirairay izay zarainay eto. Tanora mpanao hosodoko manana fanomezana mahatalanjona ary manome antsika ny fahafaha-mahita photorealism amin'ny sanganasa tsirairay avy.
Nahazo diplaoma tamin'ny Sekolin'ny kanto Lucio Fontana de Arese, ary tamin'ny 2003 dia niditra tao amin'ny Brera Academy izy. Azonao atao ny manaraka azy amin'ny alàlan'ny pejiny Facebook hahitana ampahany amin'ny asan'izy ireo na dia ao koa aza deviantART mampifaly ny besinimaro any amin'ireo faritra ireo.
Ny marina dia ho an'ny asa tsirairay hitanao, ny teny hoe farito ny zava-kanto ankamamin'ny tananao izy ireo dia sarotra kokoa ny mahita azy, na dia amin'ny totalin'ny fiderana ny teknikan'ity lahatsoratra ity aza, dia azo ambara izay sisa tavela ho hitanay avy any Dasikanio.
Mpanao hosodoko hafa mitady tanjona mitovy amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Emanuele Dascanio dia mpanao hosodoko mpaka sary izay hamela anao ho tohina tanteraka
Mpanakanto tena tsara, izay tsy isalasalana fa manana teknika mendri-piderana.-
Tranonkala hananganana CV tany am-boalohany